Nnukwu kaniyon dị na Oman na-agbakwunye ụlọ ọbịa Thai na dusitD2 Naseem Resort ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Oman » Nnukwu kaniyon dị na Oman na-agbakwunye ụlọ ọbịa Thai na dusitD2 Naseem Resort ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ Oman • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Dusit D2 Naseem Resort na Oman
Dusit bụ ụlọ ọrụ ọbịa na Thailand. German DM Gerhard Stutz ka a na-ahụ maka ịkwalite ezi ọbịa nke Thai na Oman na dusitD2 Naseem Resort ọhụrụ emere na Jabal Akhdar, Oman.
Thailandlọ ọrụ Thailand nke Dusit International Hotel Group gbasaawanye ọnụnọ ya na Middle East na oghere nke dusitD2 Naseem Resort, Jabal Akhdar
Ndi Oman Tourism Development Company (OMRAN), nke bu ndi isi ochichi nke Sultanate maka mmepe njem, ebe a na-eme ihe di nma di n’ime ohuru 8,000 sq m Adventure Park na Saiq Plateau na mpaghara Jabal Akhdar, ihe kariri ise -mgba ọsọ na-aga site na 'Grand Canyon nke Middle East,' na awa abụọ n'ụgbọala si na Muscat International Airport.
Mejupụtara broom 252 na oke ime ụlọ, ebe ezumike nke oge a nabatara ebe ugwu ya pụrụ iche nke nwere oghere sara mbara nke na-agwakọta n'enweghị nsogbu na gburugburu ya.
Jebel Akhdar ma ọ bụ Al Jabal Al Akhdar, bụ akụkụ nke Ugwu Al Hajar dị na Ad Dakhiliyah Governorate nke Oman. Ọ na-agbago elu nke 2,980 m ma na-agụnye Saiq Plateau na 2,000 m karịa ọkwa mmiri
Dusit brandus dusitD2 Naseem Resor ga-ama maka echiche dị egwu.
A ga-ebute echiche Dusit ọhụụ ọhụụ zuru oke na ịbịaru ọdịmma nke ọma n'oge ahụmịhe ọ bụla. Site n'ilekwasị anya na ike anụ ahụ na ahụike ọgụgụ isi, ụzọ a na-enweghị atụ ga-agụnye ndokwa nke ịgba ọsọ ugwu, yoga, pilates, ịkụ ọkpọ Thai, ebe a na-atụgharị uche, na ahụmịhe ndị ọzọ na ihe omume ndị na-ejide ọdịdị, nkwado, na njem, iji nye ọ funụ dị mma maka ndi okenye na umuaka.
A na-akwado ụlọ ezumike Dusit maka mmemme azụmahịa na nnọkọ mmekọrịta ọha na eze n'ọdịnihu, yana nnukwu ụlọ egwuregwu nwere ike ị nweta ndị ọbịa 150, yana ọtụtụ ụlọ nzukọ na-esote nke nwere ngwa ọdịyo na nke ọhụụ.
Parklọ njem Adventure, nke a ga-emepe n’afọ ahụ, ga-egosipụta ihe omume na-akpali akpali iji mee ka ndị ọbịa nke afọ ọ bụla nwee obi ụtọ, dị ka njem ụgbọ njem na-enye echiche dị egwu banyere ndagwurugwu gbara ya gburugburu. Ogige ụmụ anụmanụ na ebe a na-ahụ maka sayensị bụ ebe Einsteins na-eto eto nwere ike ịmalite ụdị nnwale ọ bụla na-atọ ụtọ ga-emepekwa mgbe ụwa ga-emepe njem mba ọzọ.
Nwada Suphajee Suthumpun, onye isi otu, Dusit International kwuru, “Anyi nwere obi uto ime ka ndi Oman na ulo oru a di egwu nke n’egosiputa ihe nketa, omenaala, na ima-nma nke ebe a na-acho ya n'uzo puru iche. “Site na ahụmịhe nke ahụmịhe ahụike na njem iri nri na-atọ ụtọ na njem mmụta dị egwu na ọtụtụ ọrụ na-atọ ụtọ, dusitD2 Naseem Resort, Jabal Akhdar nwere ihe niile dị na ya iji nye ezumike ezumike kwesịrị ncheta maka ndị ọbịa nke afọ niile. Daysbọchị na-egbuke egbuke dị maka njem mba ụwa, anyị na-atụ anya ịme ihe onwunwe ahụ ga-aga nke ọma. ”
Maazị Gerhard Stutz, onye isi njikwa, dusitD2 Naseem Resort, Jabal Akhdar, kwuru, sị, “Na-agakọ ụdị Dusit pụrụ iche nke ile ọbịa nke ọma nke Thai na omenala na ọdịnala mpaghara, ebe ezumike anyị na-enye ohere na-enweghị atụ maka ịtụnanya na njem na ọmarịcha ọnọdụ gbara ya gburugburu na-akpali akpali ugwu na ndagwurugwu. Ọ bụ n'ezie a pụrụ iche amụma maka njem, na anyị na-atụ anya na leverage anyị pụrụ iche ọnọdụ na onyinye na-anapụta ịtụnanya ezumike ahụmahụ na-enyere aka na-etinye ebe na map dị ka a kwesịrị-nleta ebe ka abamuru nke anyị nabatara umu obodo.